Kedu mgbe nrụpụta Africa ga-abụ? - Afrikhepri Foundation
Kedu mgbe mmeghachi azụ nke Africa?
De Nelson Mandela na Abdoulaye Wade, ụdị ejiji ndị ndu na ndị ọgụgụ isi nke Africa bụ ịkpọku "Renaissance nke Africa" ​​maka mmalite ọhụrụ nke kọntinent ahụ. O doro anyị anya na ndị na-ekwu maka Renaissance nke Africa maara n'ezie ihe ọ bụ? O doro anyị anya na ha niile na-ekwu otu ihe?
"Renaissance" sitere na ngwaa ka a mụọ ya ọzọ, ya bụ, ịmụrụ mmadụ ọzọ. Belaghachite ị ga-anwụrịrị. Ọnwụ ọdịbendị nke ga-enweta Europe mkpa a ịmụ ya ọzọ bụ Middle Ages, oge nke 1000 afọ, site na 5th ruo 15th narị afọ nke ndị aristocracy na Roman Catholic Church chịrị, site na mmụọ na ike Chukwu nke eze. Ka a mụrụ anyị ọzọ, anyị chọrọ ndị na-eche echiche, anyị chọrọ ndị nnupụisi, anyị chọrọ ndị nwere obi ike iji ụzọ nke ọgụgụ isi nwere ọnọdụ nke meworo ka ha jiri ndụ ha kwụọ ụgwọ, nke mere na ọha mmadụ niile were ohere a pụọ ​​na ya n'ihi na amụrụ Europe na "ọnwụ nke chi", ọ bụ mmeri nke secularism, ọ bụ mmeri nke akọ na uche onye mbụ wee gbakọọ ikike nchịkwa nke eze. Chineke na nke Chọọchị. Iji tugharia ozo, Afrika enwere uzo mmeri nke secularism? Afrịka ọ nọ n'okporo ụzọ na-eme ememme nkwụsịtụ na usoro nke colonial rentier?
Iji kwuo maka nlọghachi nke Africa, anyị ka kwesịrị ịchọta ndị nwere ụdị omenala na akparamàgwà nke ndị wughachiri Europe. N'Africa, ụdị nke colonial kụziri na ịnwe akara mmụta mahadum zuru ezu iji bụrụ onye maara ihe, ọkà mmụta. Na kaadị azụmaahịa nke ndị a, anyị na-ahụ ilu na kama itinye akara nke mpempe akwụkwọ ha, ọ bụ utu aha diplọma nke pụtara dị ka aha, anyị zọpụrụ ndị na-akwa emo, mgbe ndị ọgụgụ isi Sunday a. gaa n'ihu ịgbakwunye mgbasa ozi na-akwụghị ụgwọ na kaadị azụmahịa nke aha mahadum European ma ọ bụ American ebe ha gụrụ akwụkwọ. Kedu ka ọ ga - esi mee ka Africa dịghachi na ụdị mkpụrụedemede ndị a?
Kedu otu mmadụ ga-esi megide nna ukwu ahụ iji merie nnwere onwe ya ma ọ bụrụ na mmadụ anaghị etinye nsogbu iji ghọta tupu oge eruo ọgụgụ isi nke ndị na-eche echiche bụ ndị mere ka o kwe omume ịkwalite nna ukwu a? N’agbalia ighota uzo ogugu di mgbagwoju anya n’ime obodo nke ndi n’eche echiche ndi nna ha ukwu n’ekwu banyere ha?
Ebumnuche nke ihe ọmụmụ a bụ iji gbaa ndị ntorobịa Africa ume ka ha ghara inwe ọmịiko nke ndị okenye ha ka o wee hapụ ndị na-eche echiche n'echi, ndị dị adị, nwee ike ichezọ ọrụ ọrụ ha iche, chee echiche ọzọ, mee gbanwee obi ha ịgwa ndị mmadụ otu esi edozi usoro maka otu mba Africa ọhụrụ ebe mmasị zuru ụwa ọnụ nwere ike ibu ụzọ karịa ịchọ ọdịmma onwe onye nanị.
Diplọma dị ka igodo imeghe ọnụ ụzọ. Mana ozugbo ị gafere n'ọnụ ụzọ, ihe niile ka ga-eme ma ọ bụghị site na ịlele agba nke igodo 1000 ugboro ka arịa ụlọ ga-etinye onwe ya, na agba ga-anọdụ na mgbidi naanị, na eriri ndị ahụ ga-agafe ụlọ naanị ha ma nye ọkụ eletrik. Ihe dị iche n'etiti onye gụsịrị akwụkwọ na onye nwere ọgụgụ isi bụ na onye gara aga kpọtụrụ aha agụmakwụkwọ ya na ngụkọta zuru oke, ọ na-agbakwụnye ihe nzuzu ọzọ: "Isi nke Nkwalite m", aha nke a na-ekwesighị ekwupụta, mana abaghị uru na nwatakịrị zuru ezu iji kwuo ya mgbe 'arụghị ọrụ, enweghị ọrụ, arụkwaghịm na enweghị ebum n'uche. Onye nwere ọgụgụ isi, n'aka nke ọzọ, na-ewebata onwe ya site na izo aka na patent ikpeazụ ya gbara akwụkwọ, ihe ọhụụ ọhụụ ya, akwa mmiri ikpeazụ ya arụghị arụ, ụlọ ikpeazụ 100-akụkọ ọ nyere iwu ma ọ bụ duzie ọrụ ahụ.
Onye na-eche echiche bụ onye hụrụ n'anya ịkọrọ ya ihe ọmụma ya, ihe ọmụma ya, echiche ya, ọhụụ ya banyere ụwa. Na nke a gafere n'ogo nke asụsụ eji. Onwere ndi n’egosiputa onwe ha site n’akwukwo iji mee ka ulo akwukwo a mara ihe ha dere anya ma jiri aka ha dee ya n’iru ha ma guta ma ghota ha, o gha ewe akwukwo ozo iji ghota ha. Ha bụ ederede sitere na mmalite edere maka mmadụ ole na ole, o siri ike karịa mmadụ 100. Nke a na - akọwa ihe kpatara ọrụ ndị a na - ebipụta oge niile na akaụntụ onye edemede, nke onye dere ya kwụrụ ụgwọ maka mkpa ọ ga - eme ka ọ bụrụ usoro ọmụmụ ya. Onye na-eche echiche na-ekwu okwu ka ọnụọgụgụ kachasị nke ndị mmadụ ghọta ya; ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji gbochie nnyocha, ọ na-emepụta ụlọ obibi akwụkwọ nke ya. O dighi oge adighi nma kari na mmeputa edemede. La Boétie bụ naanị 18, debanyere aha na afọ mbụ nke ụlọ akwụkwọ iwu na Mahadum Orleans na France, mgbe ọ dere ọkaibe ya. Ya mere, na-enweghị diplọma, nke bụ ihe akaebe na ịbụ onye gụsịrị akwụkwọ na mahadum a ma ama na Paris ma ọ bụ Boston emebeghị ka nkwanye ùgwù ahụ bụrụ ihe na-enye ìhè. Echiche ndị ị na-ebu n'ime gị ka emetụtagodi ma ka mma site n'ọtụtụ ịgụ gị karịa ogo ọ bụla.
Dika ebe nile n’uwa nile, Afrika nwere otutu ndi ndorondoro ochichi na ndi otu ndoro ndoro ochichi, onu ogugu ha na-abawanye dika enweghi oru na-abawanye. Yabụ na ọ bụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ na mpaghara ụwa anyị enweghị, mana ndị na-eche echiche, ndị na-egwu egwuregwu, ndị nwere ike ịchụ ọrụ ha na ihe ịga nke ọma onwe ha iji mee ka ọha mmadụ niile ghọta ọnyà nke usoro ahụ. ime ngwa ngwa. Afrika choro ka ndi umuaka ya chebe onwe ha site na mmetuta ọgụgụ isi nke ndị okenye gbagọrọ agbagọ, nke rere ure n'ọkpụkpụ n'usoro adịghị mma ebe nsogbu na-aga n'ihu na-ebibi omume na ụkpụrụ omume nke ndị a. onwe ha ogbugbu. Enweghi ike imeghari Europe na ngbasa echiche ma ọ bụ ịrịọ ọgụgụ isi, kama na obi ike na ọgụgụ isi nke ndị mmadụ, mgbe mgbe ndị na-eto eto nwere ezigbo echiche nke ime ka ụmụ mmadụ pụọ na ịmụ nwa okpukpe na Ọchịchị ọchịchị 1000 afọ site na etiti afọ. Africa kwesiri ịmaliteghachite mgbe afọ 500 nke nrubeisi na mmechuihu. Ezughi oke nke ndi okenye etinyego ha na oru di nkpa nke igbutu na igabiga ihe ha kwuru ebe ozo na oru nke ihe ndi ozo.
Ọ bụghị mmadụ niile na-ebi otu ndụ n’ụwa - Prix Goncourt 2019
15 ọhụrụ site na .19,00 XNUMX
28 ejiri site na € 4,35
Zụta € 19,00
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 8, 2021 9:39
Akụkọ banyere nkà ihe ọmụma Africa
Ọnọdụ nke ịgba ohu: ihe a na-agwaghị gị